Diyo post :: नयाँ शक्ति किन ? नयाँ शक्ति किन ? - Diyo post
मागेर अधिकार पाईँदैन । अधिकारका निम्ती संघर्ष अनिवार्य छ । अझै दलित, जनजाती, महिला, मधेशी र सिमान्तकृत वर्गले अधिकार माग्दा शासक वर्गले हेर्ने दृष्टिकोण बदलिएको छैन । हाम्रो समाजमा दलितका समस्या समाधान भएका छैनन् । दलितका आवाज उठाउनको निम्ती दलितका क्षेत्रमा काम गर्ने संघसंस्था मात्र प्रयाप्त छैनन् । यसका निम्ती देशकोे नेतृत्व गर्ने राजनीतिक दलले पनि सहयोग गर्नु पर्दछ ।
विद्यमान राजनीतिक दलहरुले मुखले दलित अधिकारका कुरा धेरै गरे । मौखिक रुपमा दलितका मुद्धा उठाएजस्तो नक्कल गरे । दलितलाई भोटबैंकको रुपमा प्रयोग गरेर आफ्नो स्वार्थ पुरा गरे । तर, व्यवहारीक रुपमा दलित मुद्दाको सम्बोधन भएको छैन । अंशगत कामहरुलाई ठूलो हल्लाखल्ला गरियो । हालै नयाँ शक्ति नेपालका संयोजक डा. बाबुराम भट्टराईले दलित समुदायलाई नै राजनीतिक पार्टी र राज्य सत्ताको नेतृत्वमा पु¥याउने गर्नुभएको छ । उहाँको यो कुराले हामीलाई उत्साही बनाएको छ । उहाँले व्याबहारीक रुपमा समते दलित समुदायका धेरै व्यक्तिलाई नेतृत्वमा तहमा पु¥याउने प्रयास समेत गर्नुभएको छ । नयाँ शक्तिले जसरी सबैका अधिकारका पक्षमा बोल्दै आएको छ । त्यो वास्तवमै दलितहरुको मुक्तिको पक्षमा पनि छ । यही देखेर हामी अहिले नयाँ शक्तिमा सक्रिय भएका छौं ।
पछिल्लो समय नेपालको संविधान २०७२ मा छुवाछुत निर्मुल गर्ने भन्ने कुरा उल्लेख गरिएको छ । तर त्यसलाई संविधानमा लेखेर मात्र हुन्न व्यवहारमा लैजान सक्नु पर्छ । व्यवहारमा लैजानको निम्ती सरकारको निती तथा कार्यक्रमहरुमा यो कुरा स्पष्ट रुपले आउनु पर्दछ । कानुनमा छुवाछुतको व्यवहारले हेर्नेलाई ३ बर्षसम्म जेल र ३ हजार देखी २५ हजारसम्म जरिवानाको व्यवस्था छ । तर पनि व्यवहारीक रुपमा अहिलेसम्म पनि सरकारले कानुन कार्यन्वयन गर्न सकेको छैन ।
कानुनमा भए पनि अहिले सम्म त्यस्ता खालका सजाय कसैले पाएका छैनन् । छुवाछूतको मुद्दालाई सामान्य जस्तो ठान्ने, प्रलोभनमा पारेर मिलाउन प्रयत्न गर्ने, अनि पैसा र शक्तिको आडमा कानून हातमा लिने प्रवृत्ति समाजमा अझै कायम छ । आजको दिनमा पनि देशैभरी छुवाछुतको भावनाले हेर्ने दृष्टिकोण फेरिन सकेको छैन । यो समस्या शहरमा केही कम जस्तो देखिन्छ तर पनि गाउँघरमा अझै उस्तै छ । युवा युवतीहरु एउटै स्थानमा पढ्ने र एक अर्कामा मन मिलेर कति अन्तर जातीय बिवाह भएका छन् । तर विवाहपछी उनिहरुलाई घर तथा गाउँ निकाला गर्ने,भेदभाव गर्ने गरिन्छ । अन्तर जातिय बिवाह गरे वापत थप पिडीत बन्ने अवस्था समेत आउन थालेपछी दलित आन्दोलनको वकालत गर्नेहरुले नै त्यसैलाई कमाउ धन्दा बनाउने पनि गरेका छन् । यस्ता जोडीले समाजबाट बहिस्कार हुनु पर्ने अवस्था सँगै शहर बजारमा डेरा पाउन मुस्किल छ ।
देशमा लिखितम कानुन हुँदाहुँदै पनि परिवर्तन आएको छैन । नयाँ शक्तिको नेतृत्वले यस्ता खालको कु–विचारलाई हटाउन सक्छ भन्नेमा विश्वासका साथ हामी लागेका छौँ । साँच्चै राजनीतिक दल र सरकारले चाहने हो भने छुवाछूत हट्नलाई समय लाग्दैन । जनताहरुलाई सुसुचित गरि परिवर्तन गर्न सकिन्छ । त्यसैगरी दलितलाई आर्थीक अधिकार, शैक्षीक अधिकार साथै राजनैतिक अधिकार चाहीएको हो । नयाँ शक्तिले यो अधिकार दिलाउँछ भन्ने विश्वासका साथ हामी सक्रिय भएका छौँ र आम दलित जनसमुदायलाई पनि विस्वस्थ पार्न चाहन्छौँ ।
म आफैं पनि २०२८ सालदेखि कम्युनिष्ट आन्दोलनमा आवद्ध छु । मैले परिवर्तनका २०३६ र २०४६ का आन्दोलनमा सक्रिय हुँदै २०४९ सालमा कम्युनिष्ट पार्टीको साधारण सदस्य लिएर स्थानीय निकायमा चुनाब लडेर जितेँ । त्यसबेला देखि राजतनीतिक क्षेत्रमा अझ बढी सक्रिय भएँ । तर त्यसबेलाको सविधानमा दलितको लागी आम शोशित पिडित जनताको लागी प्रयाप्त अधिकार नभएकोले मैले दलितकै मुद्दामा लडेर दलितहरुकै लागी काम गर्छु भन्दै जन विकास परिषदको केन्द्रीय महा–सचिव, दलित संगठन दलित जातिय मुक्ति समाजमा केन्द्रीय उपाध्यक्ष भएर पनि काम गरे । पछिल्लो समय यी सबै मुद्धा डा.बाबुराम भट्टराईले नेतृत्व गरेको नयाँ शक्तिले उठाउन सक्छ भन्ने पुर्ण विस्वासका साथ नयाँ शक्तिमा सक्रिय रहदै आएको छु ।
हुन त अहिलेको रानितिक पार्टीको व्यवहार हेर्दा मलाई रानीतिमा लाग्ने मन नै थिएन । अझै पनि म दलित आन्दोलन मै लाग्ने सोंचमा थिएँ । तर यो देशमा डा.बाबुराम भटराईले ठूलो त्याग र परिवर्तन गर्नु भएको छ । देशको लागि उहाँले गरेको योगदानमा हामीले पनि सघाउनुपर्छ । डा.भट्राईले आफ्नो व्यक्तिगत स्वर्थ छोडेर आफ्नो मान मर्यादालाई कुनै प्रवाह नगरिकन नयाँ शक्ति बनाउन अग्रसर हुनु भएकोले मैले पनि त्यो अभियानमा साथ दिएको हुँ । अब देशको विकासको निम्ती नयां ढंगबाट अगाडी बढ्नु पर्दछ ।
नयाँ विचारका साथ अगाडी बढ्नु पर्दछ अब पुरानो विचारले धान्न सक्दैन त्यसैले अब हामी नयां विचार धाराका साथ अगाडी बढ्दै छौ । अव बिकासमा हामी अगाडी बढ्नु पर्छ । यो विकास हाम्रो लागि हो । जनतालाई जिम्मेवार बोध गराई विकास हामीले गर्ने र हाम्रा लागी गर्ने भनेर मानसिकता तयार पार्नुपर्दछ । नयाँ शक्तिले उठाएका पाँच ‘स’ का छुट्टाछुट्टै विशेषता छन् । यो पार्टीलाई सहयोग गरेर अगाडी बढ्न ढिला गर्नुहुन्न । यसैको मध्यमबाट देश भरका आम दलितको मुद्दा लगायत नेपालमा राजनैतिक, शैक्षिक, आर्थीक अधिकारबाट बन्चित भएको वर्गको अधिकार यही पार्टीको किताबले समेटेको छ । नयाँ शक्तिले यसैलाई प्राथमिकता दिएको छ । त्यसै विश्वासका साथ अब हामी सबै यही पार्टीमा लाग्नु पर्छ । देश र जनताको लागि यही पार्टीले केही परिवर्तन गर्छ भन्ने विश्वासका साथ अघि बढ्यौं भने मात्रै परिवर्तन संभव छ ।
आजको दिनमा जे जति राजनीतिक पार्टीहरु छन् ती सबैको विकल्प भनेको नयाँ शक्ति नै हो । यसको नेतृत्वमा आर्थिक, सामाजिक मुद्धाहरु उठाउन र हल गर्न सकिन्छ भन्नेमा मलाई विश्वास छ । बाबुराम भट्टराईले हिजोको १० बर्षे जनयुद्ध देखि सरकारमा बसेर जसरी जनताका सेवा गर्नुभयो त्यसमा उहाँको क्षमता कति छ भन्ने देखिन्छ । त्यसैले अहिले नयाँ शक्तिमा उहाँले जुन किसीमको विचारहरु दिनु भएको छ । त्यो एउटा निश्वार्थ भावना र देशको लागि नयाँ शोच र विचार हो । त्यसैले यो पार्टीले जनताको ईच्छा र आवश्यकता अनुसार चाहना पुरा गरि देश परिवर्तन गर्छ भन्ने पुर्ण विश्वास म जस्तै दलित आन्दोलनमा सक्रिय भएर लाग्ने साथीहरुले लिनुपर्दछ ।